Midowga musharixiinta mucaaradka ma waxey u dhaqaaqeen jihadii dagaalka? | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Midowga musharixiinta mucaaradka ma waxey u dhaqaaqeen jihadii dagaalka?
Muqdisho (Dalkaan.com) – Jawiga siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa halmar isla kacay kadib markii midowga musharixiinta mucaaradka ku dhawaaqeen inay qabanayaan shirweyne Qaran oo wada-tashi ah.
Deg deg Sheekh shariif oo Jeediyay Khudbad Shaki badan dhalisay, Xaalada...
Guddiga FEIT oo war cusub kasoo saaray dhaarinta xildhibaanada cusub ee...
Deg Deg Rooble oo la soo baxay Qorshe Yaab leh,...
Weeraryahanka Manchester United Anthony Martial ayaa wadahadalo la yeeshay Ralf Rangnick.
Daawo: Dabageed oo weerar culus ku qaaday ROOBLE